नेपाल र नामिबियाबीचको क्रिकेट भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ? « News of Nepal
नेपाल र नामिबियाबीचको क्रिकेट भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
नेपाल फेरि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप डिभिजन २ मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपाली समय अनुसार दिउँसो १ बजेबाट नेपालल नामिबियाबीचको खेल सुरु भएको छ । नेपाल विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट घटुवा भएपछि तीन वर्षमा दोस्रो पटक डिभिजन २ मा खेल्न लागेको हो ।
यो प्रतियोगिता नेपालको लागि आईसीसी विश्वकप क्रिकेट २०१९ मा छनोट हुन खेल्ने पाउने अवसर हो । नेपालले यसको लागि शीर्ष दुईमा रहनुपर्छ र नेपालका कप्तान पारस खड्काले विश्वकप छनोट खेल खेल्ने विश्वास गरेका छन् । यसैले पनि नेपालले आज हुने खेल जित्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
विगतको इतिहास पल्टाए पनि आयोजक नामिबियाविरुद्ध नेपाल भारी रहेको छ । नामिबियासँग नेपालले अहिलेसम्म तीन खेल खेलिसकेको छ । यसअघि नेपालमै भएको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत दुई खेल खेलेको थियो । सन् २०१६ मा कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा नेपालले दुई खेल क्रमशः ५ र ३ विकेटले जितेको थियो । यो भन्दा अगाडि डिभिजन २ मा पनि नेपाल ३ विकेटले नै जितेको थियो ।
यो आंकडाले हेर्ने हो भने नेपालले जित हासिल गर्न संघर्षरत रहेको कुरालाई भने बिर्सन हुन्न । नामिबियालाई उसैको घरेलु भुमिमा हराउन नेपालको रणनीति कस्तो हुन्छ त्यो खेल शुरु भएपछि थाहा हुनेछ । तीन वर्ष अघिको डिभिजन २ को खेलमा नामिबियाले धेरै लक्ष्य दिएको थिएन । मात्र १ सय ४३ रनको लक्ष्यमा पुग्न नेपालले सात–सात विकेट गुमाएको थियो । त्यो त कप्तान पारसले ६४ रन बनाइदिदा नेपालको संभावित हार टरेको थियो ।
यसै क्रममा २०७३ वैसाखमा भएको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा समेत नामिबियाले नेपाललाई तगडा चुनौती दिएको थियो । नेपालले नामिबियाले दिएको मध्यम लक्ष्य भेटाउन पनि एक पछि अर्को विकेट गुमाएको थियो । दोस्रो खेलमा १ सय ९६ रनको लक्ष्यमा पुग्न पारसले नै नेपाललाई जित दिलाएका थिए । उनले सतक प्रहार गरे ।
जबकी नेपालले लक्ष्य भेटाउन सात विकेट गुमाएको थियो । यसैले पनि नेपालले नामिबियासँग सम्हालिएर खेल्नु पर्ने हुन्छ ।
पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल (उपकप्तान), शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी, करण केसी, आरिफ शेख, सन्दिप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, दिलीप नाथ, ललित भण्डारी, अनिलकुमार साह, रोहितकुमार पौडेल